အမေရိကန် အာကာသစူးစမ်းလေ့လာရေးအဖွဲ့ NASA ရဲ့ ၂၀၂၀ အတွက် အောင်မြင်မှု တခုကတော့ ဇူလိုင်လ ၃၀ ရက်နေ့မှာ အင်္ဂါဂြိုဟ်ဆီကို စူးစမ်းလေ့လာရေး စက်ရုပ် နောက်တခု အောင်အောင်မြင်မြင် လွှတ်တင်နိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ နာဆာသိပ္ပံပညာရှင် ဒေါက်တာပဒေသာတင်က ပြောပါတယ်။
ဒေါက်တာပဒေသာတင်။. ။“ အင်္ဂါဂြိုဟ် စူးစမ်းလေ့လာရေး စီမံကိန်း ချထားတာကြာပါပြီ။ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် နှစ်ဆယ် အစိတ်လောက် ကတည်းကပါ။ အင်္ဂါဂြိုဟ်ကို ပထမ ကင်းထောက် ဂြိုဟ်တုတွေ လွှတ်တယ်။အင်္ဂါဂြိုဟ်ရဲ့ ရာသီဥတုတွေ တိုင်းရတာပေါ့။ ကိုယ်သွားမယ့် နေရာက ပူသလား အေးသလား မသိပဲနဲ့ သွားလို့ မရဘူးလေ။ နောက် အင်္ဂါဂြိုဟ် ပတ်လမ်းထဲကနေပြီးတော့မှ စက်ရုပ်ကလေးတွေ ပထမဦးဆုံး ၂ ခု လွှတ်ပါတယ်။ တခုကတော့ ဘက်ထရီ ဒေါင်းပြီး ပျက်သွားတယ်။ နောက်တခုကတော့ တရွေ့ရွေ့နဲ့ သွားတုန်းပဲ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၂ ကလွှတ်လိုက်တဲ့ curiosity ပေါ့နော်။ သူက အခုထိလည်း အလုပ်လုပ်တုန်းပါပဲ။ အဲဒီ စက်ရုပ်ကလေး ဆင်းသွားတာ အောင်မြင်ပြီးတဲ့ အခါ ဘူမိဗေဒ၊ ရူပဗေဒ၊ ရေမြေ ရာသီဥတု၊ တိုင်းလို့ရတဲ့ သိတဲ့ အချက်တွေကို ဒီမှာ ရှိတဲ့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေ က သေသေချာချာ လေ့လာပြီး ဒီတခေါက်တော့ တတန်လောက် လေးတဲ့၊ ကား အသေးစားလေး တစီးကို ဇူလိုင်လ ၃၀ တုန်းက အမေရိကန်နိုင်ငံက ဒုံးယာဉ်နဲ့ ပဲ လွှတ်တင်ခဲ့ပါတယ်။”
အမေရိကန်ကုမ္ပဏီကြီး ၂ ခုဖြစ်တဲ့ Boeing နဲ့ Lockheed Martin တို့ရဲ့ United Launch Alliance က တည်ဆောက်တဲ့ Atlas5ရော့ကက်ဒုံးပျံနဲ့ (ဖလော်ရီဒါပြည်နယ် Cape Canaveral အငူကနေ) လွှတ်တင်ခဲ့တာပါ။အရင်က လွှတ်တင်ခဲ့တဲ့ Spirit ၊ Opportunity နဲ့ Curiosity ယာဉ်လေးတွေဆီက ရတဲ့ အချက်အလက်တွေ ပေါ် အခြေခံပြီး တည်ဆောက်ထားတဲ့ ဘီး ၆ ဘီးပါ စူးစမ်းလေ့လာရေး စက်ရုပ်ယာဉ်ကလေးကို လွှတ်တင်ခဲ့တာပါ။
ဒေါက်တာပဒေသာတင်။. ။“ဒီတခေါက်က အရင်တခေါက်လိုပဲ စက်ရုပ်ကားလေးပဲ။ ဒီတခေါက် စက်ရုပ်ကားလေးက Perseverance လို့ ခေါ်ပါတယ်။ မြန်မာလိုအဓိပ္ပါယ်ပြန်ရင်တော့ ဇွဲ၊ လုံ့လ၊ ဝီရိယ ပေါ့နော်။ အဲဒီစက်ရုပ် ကားကလေးက တတန်လောက် လေးတယ်။ သူက တနာရီကို မီတာ တရားငါးဆယ်လောက် ကိုက် သုံး- လေးရာလောက်ပဲ သွားနိုင်ပါတယ်။”
ဒီစက်ရုပ်ယာဉ် မှာ တပ်ဆင်ထားတဲ့ စူးစမ်း တိုင်းတာရေး စက်ကရိယာတွေက နောက်ဆုံးပေါ် ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါက်တာပဒေသာတင်။. ။“အဓိက အားဖြင့်ကတော့ သိပ္ပံအချက်အလက်တွေကို စုဆောင်းပေးနိုင်တဲ့ စက်အားလုံးပေါင်း ၇ မျိုး ပါပါတယ်။ အပ်စရေး x-ray lithochemistry – x-ray flourescence ပေါ့နော်။ သူ့ရဲ့ မျက်နှာပြင်ကနေ အိပ်စရေး ရောင်ခြည် လွှတ်လိုက်ပြီးတော့ ထွက်လာတဲ့ ရောင်ခြည် ကနေမှ ပြန်တိုင်းတာ။ နောက် MEDA ကတော့ အင်္ဂါဂြိုဟ်ရဲ့ အပူချိန်၊ နောက် လေထဲမှာ ရှိတဲ့ အမှုန်လေးတွေရဲ့ အရွယ်စား ဘယ်လောက်ရှိသလဲ၊ ဘယ်လောက် သိပ်သည်းမှု ရှိသလဲ၊ ပြီးတော့ ရေငွေ့စိုထိုင်းဆ၊ relative humidity နောက်ပြီးတော့ ဓါတ်ရောင်ခြည် ရှိမရှိ၊ အဲဒါတွေကို တိုင်းတဲ စက်တခု ပါပါတယ်။
နောက်တခုက အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်မှာ အောက်ဆီဂျင် လုံးဝ မရှိဘူး။ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ပဲ ရှိတယ်။ အဲဒီတော့ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်က ကာဗွန်ရယ်၊ အောက်ဆီဂျင် ၂ လုံး ပါတဲ့အတွက် သူ့ကို crack လုပ်တယ် ပေါ့နော်။ သန့်စင်ပြီးတော့မှ အောက်ဆီဂျင် ထုတ်လိုက်တယ်။ MOXIE လို့ခေါ်ပါတယ်။
နောက် Supercam ဆိုတာ တခု ပါပါတယ်။ သူကတော့ လေဆာရောင်ခြည် ၂ ခုနဲ့ Spectrometer အလင်းသန့်စင်စက် ပေါ့နော်။ သူက လေဆာရောင်ခြည်နဲ့ အဝေးကို လှမ်းပစ်လိုက်ပြီးတော့ အဝေးကနေပြီးတော့မှ ကျောက်သားတို့ ဘာတို့ရဲ့ ဓါတုပေါင်းစပ်မှု၊ ဘူမိဗေဒသဘာဝ အဲဒါကို တိုင်းတာပါ။ နောက် MASTCAM (Mass spectrometer) ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ သူက stereoscopic ပေါ့။ ကြည့်လိုက်တဲ့ အခါ ၃ ဘက်မြင် ဟာမျိုးလောက်ကို ကောင်းတဲ့ stereoscopic ကင်မရာ တခုပါပါတယ်။နောက်တခုက RIMFAX ဆိုတာ ပါပါတယ်။ ရေဒါ (RAdio Detection And Ranging - RADAR) ပေါ့နော်။ မြေမျက်နှာပြင်ရဲ့ အောက် ပေ လေးငါးဆယ် လောက်အထိကို ရေဒါနဲ့ တိုင်းပြီး ဓါတ်သဘာဝ၊ ရေရှိသလား၊ ကျောက်ရှိသလား။ ဘယ်လိုကျောက်အမျိုးအစား လဲ ဆိုတာကို သိနိုင်တဲ့ စက်တခု ပါပါတယ်။
နောက်တခုက SHERLOC ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်နဲ့ လေဆာရောင်ခြည်သုံးတဲ့ Raman စက်ပစ္စည်း တခုပါ။ မော်လီကျူးတွေ ဘယ်လိုဖွဲ့ထားလဲ ဆိုတဲ့ဟာကို သေသေချာချာ တိုင်းလို့ရပါတယ်။ ဒီ့အပြင် မိုက်ခရိုဖုံး ၂ လုံးလည်း ပါပါတယ်။ စက်က ဘယ်နေရာမှာ ချို့ယွင်းနေသလဲ ဆိုတာ နားထောင်လို့ ရအောင် မိုက်ခရိုဖုံးလေး ၂ လုံး ထည့်ပေးလိုက်တာပါ။”
နောက်ဆုံးပေါ် စက်ကရိယာတွေနဲ့ အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်က ကျောက်တွေ မြေသားတွေနဲ့ ဘူမိဗေဒကို နားလည်နိုင်ဖို့ အပြင် သက်ရှိတွေ ရှင်သန်နိုင်မှု ရှိမရှိ အထောက်အထားတွေ ရှာဖွေဆန်းစစ်မှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစက်ရုပ်ယာဉ်ဟာ အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်မှာ အနည်းဆုံး တနှစ်လောက် -ကမ္ဘာ့အချိန်နဲ့ တွက်ရင်တော့ ၂ နှစ်လောက်- သွားလာပြီး သတ်မှတ်နေရာက ကျောက်နမူနာတွေ ကောက်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်
အခုလို သိပ္ပံအချက်လက် တိုင်းထွာမယ့် စက်တွေ အပြင် ဒီ တခေါက် ခရီးစဉ်မှာ အထူးခြားဆုံးက Perseverance စက်ရုပ်ယာဉ်ဟာ နာဆာက မြန်မာအင်ဂျင်နီယာ ဒေါ်မီမီအောင် ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့က တည်ဆောက်တဲ့ Ingenuity လို့နံမယ်ပေးထားတဲ့ ရဟတ်ယာဉ်လေးကို သယ်ဆောင် သွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လစ်သီယံ ဘက်ထရီသုံး ဒီရဟတ်ယာဉ်ကို ဆိုလာပြားတွေနဲ့ အားဖြည့်ပေးတာပါ။
ဒေါက်တာပဒေသာတင်။. ။“နာဆာရဲ့ အခု စက်ရုပ်ကားကလေး တင်ပြီးလွှတ်လိုက်တဲ့Jet Propulsion Lab က မြန်မာပြည်မှာ မွေးတဲ့ ဒေါ်မီမီအောင်၊ သူက ပရောဂျက်မန်နေဂျာ အနေနဲ့ ဦးဆောင်ပြီးတော့ ဟယ်လီကော်ပတာလေး ဆင်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီ ဟယ်လီကော်ပတာလေးက ခုန ကားလေးရဲ့ ဘိုက်ထဲမှာ ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ လောလောဆယ် ကတော့ အင်္ဂါဂြိုဟ်ရဲ့ မြေမျက်နှာပြင်နဲ့ ဘူမိဗေဒ စိတ်ဝင်စားစရာ အကောင်းဆုံး နေရာကို ဒီကားကလေးကို ချပေးလိုက်တာပါ။ ဒါပေမယ့် ကားလေးက ဘယ်သွားရမလဲ ဆိုတာကို မသိဘူး။ အဲဒီတော့ စမ်းတဝါးဝါး သွားခိုင်းမယ့်အစား ဒီဟယ်လီကော်ပတာလေးနဲ့ ထောက်လှန်းရေး လုပ်ပါတယ်။ အချက်အလက် စူးစမ်းမှုတော့ မပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သိပ္ပံအချက်အလက်တွေ သွားပြီး စူးစမ်းပေးမယ့် ဒီကား ဘယ်သွားရမလဲ ဆိုတာကို ကင်းထောက် အနေနဲ့ လွှတ်ပေးတဲ့ ဟယ်လီကော်ပတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အလွန် အသုံးဝင်ပါတယ်။”
ဒီရဟတ်ယာဉ်ပျံသန်းတဲ့ အခါမှာ စက်ရုပ်ယာဉ်က မှတ်တမ်းရိုက်ကူးထားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
အခု လွှတ်တင်တဲ့ Ingenuity ရဟတ်ယာဉ်ကနေ အနာဂတ်မှာ အင်္ဂါဂြိုဟ်မှာ စူးစမ်းလေ့လာရေး လုပ်ရမယ့် နေရာတွေကို ရွေးချယ်နိုင်မယ်လို့ တွက်ဆထားတာပါ။ ဒါ့အပြင်
တခြားဂြိုဟ်တွေမှာပါ ပျံသန်းမှုတွေ လုပ်နိုင်တယ် ဆိုတာကို သက်သေပြဖို့ စမ်းသပ်တာဖြစ်ကြောင်း နာဆာက ပြောပါတယ်။
နာဆာက Perseverance စက်ရုပ်ယာဉ် ကို အင်္ဂါဂြိုဟ်မြောက်ပိုင်းက ကြီးမားတဲ့ (Jezero Crater) မီးတောင်ဝ နေရာမှာ ဆင်းသက်ဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။ နာဆာက အခုလို အင်္ဂါဂြိုဟ်စူးစမ်းရေး ယာဉ်
လွှတ်တင်တာနဲ့ တချိန်ထဲလိုလိုမှာပဲ အင်္ဂါဂြိုလ်ပေါ်ကို တခြားနိုင်ငံတွေကလည်း အာကာသစူးစမ်းရေးယာဉ်တွေ လွှတ်တင်ခဲ့ကြတာပါ။ ဘာကြောင့်ပါလဲ။
ဒေါက်တာပဒေသာတင်။. ။“အင်္ဂါဂြိုဟ်ကို တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ နောက် UAE (United Arab Emirates) သမ္မတနိုင်ငံ ကနေလည်း လွှတ်တင်လိုက်ပါတယ်။ သိသလောက်ဆိုရင် အီးယူနဲ့ ရုရှားနိုင်ငံတွေကလည်း လွှတ်တင်လိုက်တယ်လို့ ကြားပါတယ်။ တပြိင်နက်ထဲ ပြိုင်တူ ဘာကြောင့် လွှတ်တင်ရသလဲဆိုတော့၊ သူက တလပဲ အချိန်ရတယ်။ ဇူလိုင်လ ၁၅ ကနေ သြဂုတ်လ ၁၅ ရက် အတွင်းမှာပဲ လွှတ်ရင်လွှတ်၊ အဲဒီအချိန်မှာ မလွှတ်ဖြစ်လို့ရှိရင် နောက်ထပ် လွှတ်ဖို့အတွက် နောက် ၂ နှစ် စောင့်ရမယ်။ ကမ္ဘာနဲ့ အင်္ဂါဂြိုဟ်နဲ့ ဒီကလွှတ်လိုက်တဲ့ဟာနဲ့ အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်ကို ဆင်းနိုင်တဲ့ ဟာနဲ့က ကွက်တိ လမ်းကြောင်းက အတိုဆုံးလဲ ဖြစ်မယ်၊ အမြန်ဆုံးလည်း ရောက်မယ်။ ဒါမှ မဟုတ်လို့ရှိရင် ၄ နှစ်လောက် ကြာလိမ့်မယ်။ အဲဒါကြောင့် ဒီအချိန်ကောင်းကို စောင့်ပြီး၊ အဲဒီ နိုင်ငံ သုံးလေး နိုင်ငံက ပြိုင်တူ လွှတ်တင်ကြတာပါ။”
ဒေါက်တာပဒေသာတင်ရဲ့ ပြောကြားချက်နဲ့ပဲ ဒီသီတင်းပတ်အတွက် သိပ္ပံနဲ့ နည်းပညာကဏ္ဍကို ဒီမှာပဲ ရပ်နားလိုက်ပါရစေ။
အမရေိကနျ အာကာသစူးစမျးလလေ့ာရေးအဖှဲ့ NASA ရဲ့ ၂၀၂၀ အတှကျ အောငျမွငျမှု တခုကတော့ ဇူလိုငျလ ၃၀ ရကျနမှေ့ာ အင်ျဂါဂွိုဟျဆီကို စူးစမျးလလေ့ာရေး စကျရုပျ နောကျတခု အောငျအောငျမွငျမွငျ လှတျတငျနိုငျခဲ့တာ ဖွဈတယျလို့ နာဆာသိပ်ပံပညာရှငျ ဒေါကျတာပဒသောတငျက ပွောပါတယျ။
ဒေါကျတာပဒသောတငျ။. ။“ အင်ျဂါဂွိုဟျ စူးစမျးလလေ့ာရေး စီမံကိနျး ခထြားတာကွာပါပွီ။ လှနျခဲ့တဲ့ အနှဈ နှဈဆယျ အစိတျလောကျ ကတညျးကပါ။ အင်ျဂါဂွိုဟျကို ပထမ ကငျးထောကျ ဂွိုဟျတုတှေ လှတျတယျ။ အင်ျဂါဂွိုဟျရဲ့ ရာသီဥတုတှေ တိုငျးရတာပေါ့။ ကိုယျသှားမယျ့ နရောက ပူသလား အေးသလား မသိပဲနဲ့ သှားလို့ မရဘူးလေ။ နောကျ အင်ျဂါဂွိုဟျ ပတျလမျးထဲကနပွေီးတော့မှ စကျရုပျကလေးတှေ ပထမဦးဆုံး ၂ ခု လှတျပါတယျ။ တခုကတော့ ဘကျထရီ ဒေါငျးပွီး ပကျြသှားတယျ။ နောကျတခုကတော့ တရှရှေ့နေဲ့ သှားတုနျးပဲ။ ပွီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၂ ကလှတျလိုကျတဲ့ curiosity ပေါ့နျော။ သူက အခုထိလညျး အလုပျလုပျတုနျးပါပဲ။ အဲဒီ စကျရုပျကလေး ဆငျးသှားတာ အောငျမွငျပွီးတဲ့ အခါ ဘူမိဗဒေ၊ ရူပဗဒေ၊ ရမွေေ ရာသီဥတု၊ တိုငျးလို့ရတဲ့ သိတဲ့ အခကျြတှကေို ဒီမှာ ရှိတဲ့ သိပ်ပံပညာရှငျတှေ က သသေခြောခြာ လလေ့ာပွီး ဒီတခေါကျတော့ တတနျလောကျ လေးတဲ့၊ ကား အသေးစားလေး တစီးကို ဇူလိုငျလ ၃၀ တုနျးက အမရေိကနျနိုငျငံက ဒုံးယာဉျနဲ့ ပဲ လှတျတငျခဲ့ပါတယျ။”
အမရေိကနျကုမ်ပဏီကွီး ၂ ခုဖွဈတဲ့ Boeing နဲ့ Lockheed Martin တို့ရဲ့ United Launch Alliance က တညျဆောကျတဲ့ Atlas5ရော့ကကျဒုံးပြံနဲ့ (ဖလျောရီဒါပွညျနယျ Cape Canaveral အငူကနေ) လှတျတငျခဲ့တာပါ။ အရငျက လှတျတငျခဲ့တဲ့ Spirit ၊ Opportunity နဲ့ Curiosity ယာဉျလေးတှဆေီက ရတဲ့ အခကျြအလကျတှေ ပျေါ အခွခေံပွီး တညျဆောကျထားတဲ့ ဘီး ၆ ဘီးပါ စူးစမျးလလေ့ာရေး စကျရုပျယာဉျကလေးကို လှတျတငျခဲ့တာပါ။
ဒေါကျတာပဒသောတငျ။. ။“ဒီတခေါကျက အရငျတခေါကျလိုပဲ စကျရုပျကားလေးပဲ။ ဒီတခေါကျ စကျရုပျကားလေးက Perseverance လို့ ချေါပါတယျ။ မွနျမာလိုအဓိပ်ပါယျပွနျရငျတော့ ဇှဲ၊ လုံ့လ၊ ဝီရိယ ပေါ့နျော။ အဲဒီစကျရုပျ ကားကလေးက တတနျလောကျ လေးတယျ။ သူက တနာရီကို မီတာ တရားငါးဆယျလောကျ ကိုကျ သုံး- လေးရာလောကျပဲ သှားနိုငျပါတယျ။”
ဒီစကျရုပျယာဉျ မှာ တပျဆငျထားတဲ့ စူးစမျး တိုငျးတာရေး စကျကရိယာတှကေ နောကျဆုံးပျေါ ပစ်စညျးတှဖွေဈပါတယျ။
ဒေါကျတာပဒသောတငျ။. ။“အဓိက အားဖွငျ့ကတော့ သိပ်ပံအခကျြအလကျတှကေို စုဆောငျးပေးနိုငျတဲ့ စကျအားလုံးပေါငျး ၇ မြိုး ပါပါတယျ။ အပျစရေး x-ray lithochemistry – x-ray flourescence ပေါ့နျော။ သူ့ရဲ့ မကျြနှာပွငျကနေ အိပျစရေး ရောငျခွညျ လှတျလိုကျပွီးတော့ ထှကျလာတဲ့ ရောငျခွညျ ကနမှေ ပွနျတိုငျးတာ။ နောကျ မီတာကတော့ အင်ျဂါဂွိုဟျရဲ့ အပူခြိနျ၊ နောကျ လထေဲမှာ ရှိတဲ့ အမှုနျလေးတှရေဲ့ အရှယျစား ဘယျလောကျရှိသလဲ၊ ဘယျလောကျ သိပျသညျးမှု ရှိသလဲ၊ ပွီးတော့ ရငှေစေို့ထိုငျးဆ၊ relative humidity နောကျပွီးတော့ ဓါတျရောငျခွညျ ရှိမရှိ၊ အဲဒါတှကေို တိုငျးတဲ စကျတခု ပါပါတယျ။
နောကျတခုက အင်ျဂါဂွိုဟျပျေါမှာ အောကျဆီဂငျြ လုံးဝ မရှိဘူး။ ကာဗှနျဒိုငျအောကျဆိုဒျပဲ ရှိတယျ။ အဲဒီတော့ ကာဗှနျဒိုငျအောကျဆိုဒျက ကာဗှနျရယျ၊ အောကျဆီဂငျြ ၂ လုံး ပါတဲ့အတှကျ သူ့ကို crack လုပျတယျ ပေါ့နျော။ သနျ့စငျပွီးတော့မှ အောကျဆီဂငျြ ထုတျလိုကျတယျ။ MOXIE လို့ချေါပါတယျ။
နောကျ Supercam ဆိုတာ တခု ပါပါတယျ။ သူကတော့ လဆောရောငျခွညျ ၂ ခုနဲ့ Spectrometer အလငျးသနျ့စငျစကျ ပေါ့နျော။ သူက လဆောရောငျခွညျနဲ့ အဝေးကို လှမျးပဈလိုကျပွီးတော့ အဝေးကနပွေီးတော့မှ ကြောကျသားတို့ ဘာတို့ရဲ့ ဓါတုပေါငျးစပျမှု၊ ဘူမိဗဒေသဘာဝ အဲဒါကို တိုငျးတာပါ။ နောကျ Mass spec (Mass spectrometer) ဆိုတာ ရှိပါတယျ။ သူက stereoscopic ပေါ့။ ကွညျ့လိုကျတဲ့ အခါ ၃ ဘကျမွငျ ဟာမြိုးလောကျကို ကောငျးတဲ့ stereoscopic ကငျမရာ တခုပါပါတယျ။ နောကျတခုက RIMFAX ဆိုတာ ပါပါတယျ။ ရဒေါ (RAdio Detection And Ranging - RADAR) ပေါ့နျော။ မွမေကျြနှာပွငျရဲ့ အောကျ ပေ လေးငါးဆယျ လောကျအထိကို ရဒေါနဲ့ တိုငျးပွီး ဓါတျသဘာဝ၊ ရရှေိသလား၊ ကြောကျရှိသလား။ ဘယျလိုကြောကျအမြိုးအစား လဲ ဆိုတာကို သိနိုငျတဲ့ စကျတခု ပါပါတယျ။
နောကျတခုက SHERLOC ခရမျးလှနျရောငျခွညျနဲ့ လဆောရောငျခွညျသုံးတဲ့ Raman စကျပစ်စညျး တခုပါ။ မျောလီကြူးတှေ ဘယျလိုဖှဲ့ထားလဲ ဆိုတဲ့ဟာကို သသေခြောခြာ တိုငျးလို့ရပါတယျ။ ဒီ့အပွငျ မိုကျခရိုဖုံး ၂ လုံးလညျး ပါပါတယျ။ စကျက ဘယျနရောမှာ ခြို့ယှငျးနသေလဲ ဆိုတာ နားထောငျလို့ ရအောငျ မိုကျခရိုဖုံးလေး ၂ လုံး ထညျ့ပေးလိုကျတာပါ။”
နောကျဆုံးပျေါ စကျကရိယာတှနေဲ့ အင်ျဂါဂွိုဟျပျေါက ကြောကျတှေ မွသေားတှနေဲ့ ဘူမိဗဒေကို နားလညျနိုငျဖို့ အပွငျ သကျရှိတှေ ရှငျသနျနိုငျမှု ရှိမရှိ အထောကျအထားတှေ ရှာဖှဆေနျးစဈမှာလညျး ဖွဈပါတယျ။ ဒီစကျရုပျယာဉျဟာ အင်ျဂါဂွိုဟျပျေါမှာ အနညျးဆုံး တနှဈလောကျ - ကမ်ဘာ့အခြိနျနဲ့ တှကျရငျတော့ ၂ နှဈလောကျ- သှားလာပွီး သတျမှတျနရောက ကြောကျနမူနာတှေ ကောကျယူမှာဖွဈပါတယျ
အခုလို သိပ်ပံအခကျြလကျ တိုငျးထှာမယျ့ စကျတှေ အပွငျ ဒီ တခေါကျ ခရီးစဉျမှာ အထူးခွားဆုံးက Perseverance စကျရုပျယာဉျဟာ နာဆာက မွနျမာအငျဂငျြနီယာ ဒျေါမီမီအောငျ ဦးဆောငျတဲ့အဖှဲ့က တညျဆောကျတဲ့ Ingenuity လို့နံမယျပေးထားတဲ့ ရဟတျယာဉျလေးကို သယျဆောငျ သှားတာ ဖွဈပါတယျ။ လဈသီယံ ဘကျထရီသုံး ဒီရဟတျယာဉျကို ဆိုလာပွားတှနေဲ့ အားဖွညျ့ပေးတာပါ။
ဒေါကျတာပဒသောတငျ။. ။“နာဆာရဲ့ အခု စကျရုပျကားကလေး တငျပွီးလှတျလိုကျတဲ့ Jet Propulsion Lab က မွနျမာပွညျမှာ မှေးတဲ့ ဒျေါမီမီအောငျ၊ သူက ပရောဂကျြမနျနဂြော အနနေဲ့ ဦးဆောငျပွီးတော့ ဟယျလီကျောပတာလေး ဆငျလိုကျပါတယျ။ အဲဒီ ဟယျလီကျောပတာလေးက ခုန ကားလေးရဲ့ ဘိုကျထဲမှာ ထညျ့ပေးလိုကျပါတယျ။ လောလောဆယျ ကတော့ အင်ျဂါဂွိုဟျရဲ့ မွမေကျြနှာပွငျနဲ့ ဘူမိဗဒေ စိတျဝငျစားစရာ အကောငျးဆုံး နရောကို ဒီကားကလေးကို ခပြေးလိုကျတာပါ။ ဒါပမေယျ့ ကားလေးက ဘယျသှားရမလဲ ဆိုတာကို မသိဘူး။ အဲဒီတော့ စမျးတဝါးဝါး သှားခိုငျးမယျ့အစား ဒီဟယျလီကျောပတာလေးနဲ့ ထောကျလှနျးရေး လုပျပါတယျ။ အခကျြအလကျ စူးစမျးမှုတော့ မပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ သိပ်ပံအခကျြအလကျတှေ သှားပွီး စူးစမျးပေးမယျ့ ဒီကား ဘယျသှားရမလဲ ဆိုတာကို ကငျးထောကျ အနနေဲ့ လှတျပေးတဲ့ ဟယျလီကျောပတာ ဖွဈတဲ့အတှကျ အလှနျ အသုံးဝငျပါတယျ။”
ဒီရဟတျယာဉျပြံသနျးတဲ့ အခါမှာ စကျရုပျယာဉျက မှတျတမျးရိုကျကူးထားမှာလညျးဖွဈပါတယျ။
အခု လှတျတငျတဲ့ Ingenuity ရဟတျယာဉျကနေ အနာဂတျမှာ အင်ျဂါဂွိုဟျမှာ စူးစမျးလလေ့ာရေး လုပျရမယျ့ နရောတှကေို ရှေးခယျြနိုငျမယျလို့ တှကျဆထားတာပါ။ ဒါ့အပွငျ
တခွားဂွိုဟျတှမှောပါ ပြံသနျးမှုတှေ လုပျနိုငျတယျ ဆိုတာကို သကျသပွေဖို့ စမျးသပျတာဖွဈကွောငျး နာဆာက ပွောပါတယျ။
နာဆာက Perseverance စကျရုပျယာဉျ ကို အင်ျဂါဂွိုဟျမွောကျပိုငျးက ကွီးမားတဲ့ (Jezero Crater) မီးတောငျဝ နရောမှာ ဆငျးသကျဖို့ စီစဉျထားပါတယျ။ နာဆာက အခုလို အင်ျဂါဂွိုဟျစူးစမျးရေး ယာဉျ
လှတျတငျတာနဲ့ တခြိနျထဲလိုလိုမှာပဲ အင်ျဂါဂွိုလျပျေါကို တခွားနိုငျငံတှကေလညျး အာကာသစူးစမျးရေးယာဉျတှေ လှတျတငျခဲ့ကွတာပါ။ ဘာကွောငျ့ပါလဲ။
ဒေါကျတာပဒသောတငျ။. ။“အင်ျဂါဂွိုဟျကို တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ နောကျ UAE (United Arab Emirates) သမ်မတနိုငျငံ ကနလေညျး လှတျတငျလိုကျပါတယျ။ သိသလောကျဆိုရငျ အီးယူနဲ့ ရုရှားနိုငျငံတှကေလညျး လှတျတငျလိုကျတယျလို့ ကွားပါတယျ။ တပွိငျနကျထဲ ပွိုငျတူ ဘာကွောငျ့ လှတျတငျရသလဲဆိုတော့၊ သူက တလပဲ အခြိနျရတယျ။ ဇူလိုငျလ ၁၅ ကနေ သွဂုတျလ ၁၅ ရကျ အတှငျးမှာပဲ လှတျရငျလှတျ၊ အဲဒီအခြိနျမှာ မလှတျဖွဈလို့ရှိရငျ နောကျထပျ လှတျဖို့အတှကျ နောကျ ၂ နှဈ စောငျ့ရမယျ။ ကမ်ဘာနဲ့ အင်ျဂါဂွိုဟျနဲ့ ဒီကလှတျလိုကျတဲ့ဟာနဲ့ အင်ျဂါဂွိုဟျပျေါကို ဆငျးနိုငျတဲ့ ဟာနဲ့က ကှကျတိ လမျးကွောငျးက အတိုဆုံးလဲ ဖွဈမယျ၊ အမွနျဆုံးလညျး ရောကျမယျ။ ဒါမှ မဟုတျလို့ရှိရငျ ၄ နှဈလောကျ ကွာလိမျ့မယျ။ အဲဒါကွောငျ့ ဒီအခြိနျကောငျးကို စောငျ့ပွီး၊ အဲဒီ နိုငျငံ သုံးလေး နိုငျငံက ပွိုငျတူ လှတျတငျကွတာပါ။”
ဒေါကျတာပဒသောတငျရဲ့ ပွောကွားခကျြနဲ့ပဲ ဒီသီတငျးပတျအတှကျ သိပ်ပံနဲ့ နညျးပညာကဏ်ဍကို ဒီမှာပဲ ရပျနားလိုကျပါရစေ။